प्रदेश २ः नामाकरण र राजधानीको किचलो, किन पास भएन ? - TodayKhabar
सामाचार टिप्पणी: लामो समयको प्रयास पछि थालिएको प्रदेश २ को नामाकरणको प्रयास असफल बनेको छ । सत्तारुढ दलसँग दुई तिहाईको संख्या नहुँदा प्रतिपक्षमा रहेका कि त नेपाली काँग्रेस वा नेकपाले सरकारलाई नसघाएको खण्डमा नामाकरण र राजधानीको विषयमा सहमती जुट्न कठिन छ ।
नामाकरणको विषयमा बढी पेचिलो देखिन्छ, यदपि राजधानीको विषयमा लगभग सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षीबीच मोटामोटी सहमति बनेको देखिन्छ ।
तर हिजो भएको मतदान प्रक्रियामा सत्तारुढ दलले अगाडि सारेको ‘मधेश प्रदेश’को नाम संसदबाट पास हुन नसकेपछि बाध्यात्मक अवस्थामा सत्तासिन दलले नामाकरणको विषयमा विपक्षमा मतदान गर्ने निधो गरेको हो । यदपी सत्तारुढ दल ‘जनकपुर’ आसपासलाई ‘राजधानी’ बनाउने विषयमाकुनै दुविधा नरहेको देखिन्छ ।
नामाकरण र राजधानीको विषयमा कुरा गर्दा प्रदेश २ भित्रको डायनामिक्सलाई बुझनु जरुरी छ । प्रदेश २ भित्र जनकपुर पूर्व र जनकपुर दक्षिणको समिकरण र बुझाई यसको महत्वपूर्ण पक्ष हो ।
जनकपुरबाट दक्षिण पर्सासम्मका लगभग सबै पार्टीका सांसदहरुले ‘मधेश प्रदेश’ हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन । उनीहरुले मधेश प्रदेश नामाकरण भए राजधानीको विषयमा सहमति जनाउन सकिने बुझाई हो । तर,जब ‘मधेश प्रदेश’ फेल भए तब जनकपुर आसपासलाई राजधानी मानेर जानु परिस्थितीले नदिएको भन्दै यसको विपक्षमा उभिएका हुन ।
अथवा यसरी बुझौं, जनकपुर दक्षिणको बुझाईमा मिथिला, जानकी नामाकरणमा त्यति सहज महसुस गर्दैन आफुलाई किन भने जनकपुर दक्षिण खासगरी सर्लाही, रौटहट, बारा र पर्सा क्षेत्रमा भोजपुरी बाहुल्य क्षेत्र भएको हुनाले मैथली र मिथिला वा जानकी प्रदेश प्रति फरक दृष्टिकोण राख्दछन् । त्यसमा पनि आर्थिक राजधानीको रुपमा स्थापित वीरगञ्जलाई पनि राजधानी बनाउनु पर्ने माग जोरतोडेले उठेकै हो । यदपी, मधेश आन्दोलनको मुख्यमागलाई समेट्ने हो भने मधेश प्रदेश सँग उनीहरुको कुनै आपत्ती नरहेको बुझाई देखिन्छ । प्रदेशको नाम ‘मधेश प्रदेश’ भए राजधानी जनकपुरलाई मान्न सकिने उनीहरुको तर्क रहेका छन् ।
अब कुरा गरौं, जनकपुर पूर्व तर्फको बुझाईको बारेमा, खासमा जनकपुर देखि पूर्व सप्तरी सम्म न नामाकरणको विषयमा त्यति फरक बुझाई छ न त राजधानीको विषयमा नै । जनकपुर पूर्व सप्तरी सम्मका नेकपा, राजपा, र नेपाली काँग्रेसका सांसदहरुलाई राजधानी जनकपुर र मधेश प्रदेश सँग आपत्ति रहेको देखिदैन । उनीहरुको सामान्य बुझाई के हो भने, मधेश आन्दोलनको मुलमर्म र सहिदको सम्मान हुने गरी प्रदेशको नामाकरण हुनु पर्दछ ।
‘मधेश प्रदेश’ नाम फेल भएपछि बारा, पर्सा र रौतहटका सबै दलका सांसदहरुले असन्तुष्टि जनाउँदै राजधानी सम्बन्धी प्रस्ताव पनि पारित हुन नदिने मुडमा पुगेका थिए। समाजवादी र राजपाको बैठकमा पनि सांसदहरुले प्रदेशको नामाकंन फेल भएको खण्डमा राजधानी टुँगो लगाउनु उपयुक्त नहुने जिकिर गरेका थिए।
राजधानीको विषयमा मतदान हुँदा जनकपुरधामलाई राजधानी बनाउने पक्षमा ५२ र विपक्षमा पनि ५२ मत खसेको थियो।
नेकपाले प्रस्ताव गरेको ‘जानकी प्रदेश’को पक्षमा जम्मा ३७ मत त्यसैगरी, कांग्रेसले प्रस्ताव गरेको ‘मिथिला–भोजपुरा’को पक्षमा जम्मा २८ मत परेको थियो।
त्यस्तै, कांग्रेसकै केही विद्रोही सांसदहरुले दर्ता गराएको ‘मध्य मधेश’को पक्षमा ४२ मत परेको थियो भने राजपा र समाजवादीको संयुक्त ‘मधेश प्रदेश’को पक्षमा सबभन्दा बढी मत अर्थात ६० मत खसेको थियो।
नाम र राजधानी सम्बन्धी प्रस्ताव पारित हुन दुई तिहाई अथवा प्रदेश २ मा जम्मा १०७ सांसद संख्या रहेको हुँदा त्यसमध्ये ७२ जना सांसदले पक्षमा मतदान गर्नु पर्ने हुन्छ ।
हिजोको मतदानबाट एउटा सन्देश प्रवाह भएको छ त्यो के हो भने, यदि प्रदेशको नाम मधेश प्रदेश पास भए मात्रै जनकपुर राजधानीको लागि स्विकार्य हुने अन्यथा नहुने । तसर्थ, नामाकरण र राजधानीको विषयमा वृहत सहकार्य र सहमति नगरीकन प्रकृया अगाडि बढाउनु उचित देखिदैन । एकले अर्कालाई नाङ्गो पार्ने खेल जनताले रुचाएका छैनन् । हिजो जे जस्तो गतिविधि संसदमा देखियो त्यसबाट प्रदेश २ का जनता निकै दुखित भएका छन् ।
राजनीतिक रुपमा काँग्रेसलाई मधेश प्रदेशलाई मान्दा खासै घाटा थिएन, २०६४ सालको तत्कालिन मधेश आन्दोलन २ को समयमा आन्दोलनरत पक्ष र राज्यको पक्षबाट हस्ताक्षरकर्ता स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोइरालाबीच भएको ८ बुदें सहमतिको बुँदा नम्बर २ मा मधेश प्रदेशलाई स्वीकार गरेका थिए । यदपी आज आएर त्यसलाई अस्विकार गरेका छन् । श्रोतका अनुसार, सत्तारुढ दललाई काँग्रेसका नेताहरुले मधेश प्रदेशको पक्षमा मतदान गर्ने विश्वास दिलाएका थिए, सोही अनुसार सत्तारुढ दल ढुक्क जस्तै बसेका थिए, तर अन्तिम समयमा कसरी कुरा बिग्रियो अझै प्रष्ट हुन सकेको छैन । नेकपाले विगत देखि नै मधेश प्रदेशको विपक्षमा मतदान गर्ने खुल्लेआम भन्दै आएका थिए । उनीहरुको पुरानो अडान कायम राख्नु उनीहरुको बाध्यता पनि थियो ।
सत्तारुढ दलले नेकपा र नेपाली काँग्रेसलाई मधेश विरोधी देखाउने इख र नेकपा र काँग्रेसले मधेश राजपा र सपाको पेवा होइन हेरुम न त, भने बुझाईले गर्दा हिजो संसदमा देखिएको परिदृश्यको मूल्यांकन हो । समग्रमा यसले भोलीका दिनमा दलहरुलाई क्षति गर्ने देखिन्छ ।
बजारमा हाहाकार ! न ग्यास न मास्क
राजपा र सपा एकताको बाधक उपेन्द्र यादव, उपेन्द्र यादवद्धारा अशोक राईलाई स्विकार नगरेको खुलासा
गुण्डा नाइके बिष्णु लामामाथि प्रहरीद्धारा गोली प्रहार